🥇 ▷ Endling wuxuu ku imaan doonaa Xbox One si kor loogu qaado wacyigelinta deegaanka ✅
Endling wuxuu ku imaan doonaa Xbox One si kor loogu qaado wacyigelinta deegaanka
Ma qiyaasi kartaa adduun dumay oo damac u galay inuu cuno aadanaha? Kaliya maahan inaad naftaada geliso booskaas laakiin ka fikir inaad tahay xayawaan aan difaac lahayn oo ugaarsanaya dhammaan isbedeladaas dhacaya ee ku yimid damacnimada noocyadayada. Iyada oo qaab loo raacayo khadkaas, Istuudiyaha ‘Herobeat’ wuxuu ku soo bandhigi doonaa ciyaarta fiidiyaha Xbox One Caqli, soo jeedin indie kaas oo aan kuxiran doono doorka hooyo slut, taas oo ku qasbanaan doonta inay u dhaqaajiso goolashooda hore si looga hor tago inay dhimanayaan.
Waa inaan aragnaa sida jawigeenkeennu ahaan doono markaa, maadaama ciyaarta Herobeat Studios aysan ku imaan doonin Xbox One ilaa afarta bilood ee ugu horreysa 2021. Haa, in kabadan laba sano oo sugitaanka in isku mid ay nagu filan yihiin inaan haysanno waxoogaa wacyigelin deegaan ah, kaliya waxa ciyaartu ugu talagashay inay gudbiso, adiga oo gelinaysa kabaha dawacooyinkan kuwaas oo ka cararaya inta badan khatarta ah.
Endling ujeedadiisu waa in la bilaabo farriinta deegaanka ee adduunka
In Endling waa inaan baarno taxane dhan oo xaalado ah oo ku saleysan xaqiiqada, meesha aan ku arki doonno dhibaatooyinka deegaanka Kuwaasoo, nasiib darro ah, waxaan ku arki karnaa qaar ka mid ah duruufaha maalin-kasta jira. Sidii dawacooyin, waa inaan ugaarsannaa xayawaanka kale si aan ubadkeenna u sii noolaano (oo aan uga fogaano ugaarsiga).
In kasta oo ay u muuqato wax la yaab leh markay tahay kiisaska dawacooyinka qaarkood, waa inaanu gaarno go’aanno baddali doona jidkayaga, si looga hortago bini’aadamka inay waxyeelleeyaan. Dabcan, ahaan ahaan dawacooyin khiyaano ah oo aan nahay, waan iskudhaafsan karnaa annaga oo adeegsanayna habeenkii oo aan badbaado ku sugnaaneyno inta lagu gudajiro maalinta xeryaha guryaha lagu keydiyo annaga oo qorsheynayna tallaabada xigta, maxaa yeelay waxay si fudud u ahaan kartaa tii ugu dambeysay.
Waxaan kuugu tageynaa qormada ‘Endling trailer’ si aad sifiican u aragto qisada ciyaarta iyo qeybta shaxdeeda: